पराजितलाई उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसमा दबाब, पौडेल र निधि इच्छुक! | Rajmarga
पराजितलाई उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसमा दबाब, पौडेल र निधि इच्छुक!
काठमाडौ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार नबनाउन कांग्रेसभित्र दबाब बढेको छ । दुवै तहका निर्वाचनमा पराजित नाम चलेका धेरै नेताले फेरि पनि उम्मेदवारी दाबी गर्न सक्ने देखिएपछि उनीहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाइएको छ ।
निर्वाचनमा पार्टीको नतिजा कमजोर भए पनि यसपटक नयाँलाई उम्मेदवार बनाउन दबाब परेको ती नेताले बताए । राष्ट्रिय सभामा ३५ वर्ष उमेर पुगेको, ख्यातिप्राप्त, देशका लागि योगदान गरेको, विषय विज्ञ व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
उम्मेदवार दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदा पनि कांग्रेसले उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया र मापदण्डका विषयमा छलफल गरेको छैन । प्रदेश प्रमुख र शपथ गर्ने कार्यालयको टुंगो लागेपछि पार्टीले उम्मेदवार चयनबारे छलफल गर्ने केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सभाको अस्थायी केन्द्रबारे प्रधानमन्त्री छलफलमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनमा यसको टुंगो लागेपछि उम्मेदवारबारे छलफल गर्छौँ ।’
कांग्रेसले प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित दलसँग तालमेल गर्नुपर्ने भएको छ । मधेसी दलहरू पनि कांग्रेससँग तालमेल गर्नैपर्ने अवस्थामा छन् । केन्द्रीय सदस्य महतले मधेसकेन्द्रित दलसँग तालमेलको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । अन्य प्रदेशमा भने तालमेल हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Previous post: जाजरकोट महामारी : मरेपछि ‘भर्बल अटोप्सी’ !
Next post: चिसोले एउटै वडामा साताभित्र पाँच जनाको मृत्यु